Big Bag | Myanmar Mp3 Album
Home / Myanmar Artist / အဆိုတော် (အဖွဲ့) / Big Bag
Category Archives: Big Bag
01 Telephone – Rဇာနည် , Bobby Soxer 02 Don\_’t Go Away – Big Bag + Oopsie Eyes 03 မြစ်ဝှမ်းဇတ်ညွှန်း – J ME , အိမ့်ချစ် 04 စုံလင်သွားတဲ့ ချစ်သူများ – ညဏ်လင်းအောင် ၊ ဟေမာနေဝင်း 05 ချစ်ခြင်းရဲ့ သီချင်း – စည်သူလွင် ၊ သီရိဆွေ 06 ညအလှပန်းချီ – J Me , အိမ့်ချစ် 07 ငါ့ရဲ့ Tatoo – Rဇာနည် , သီရိဆွေ 08 အဲ့ဒီနေ့က – … Continue Reading →
February 20, 2013 Datha အိမ့်ချစ် အခွေ (အများ) စည်သူလွင် ဥာဏ်လင်းအောင် သီရိဆွေ Big Bag Bobby Soxer J-Me Myanmar Artist New Myanmar Albums Rဇာနည် Leaveacomment
Big Bag – 1-11
၁။အမှည့်လွန် ၂။၀ှက်ထားတဲ့ကောင်းကင် ၃။သူစိမ်း ၄။ချစ်စရာလောက ၅။လက်နဲ့ဖြန့်ခံထား ၆။ဖြည်းဖြည်းနှေးနှေး ၇။ဘ၀တစ်ခုကျကွဲခြင်း ၈။ဂရမ်မီပဲယူလိုက်တော့မယ်ကိုကိုချစ်ရယ် ၉။မျက်ကွယ်ပြုချိန် ၁၀။ဒါပဲကျန်တယ် ၁၁။စိတ်တေလေ ၁၂။ one way point of view ၁၃။ငါလဲစိတ်နဲ့ ၁၄။မာနနန်းတော် Direct Mirror Link Credits to thiha -> mmcpforum.net
November 4, 2011 လူသား အဆိုတော် (ကျား) Big Bag Myanmar Artist3Comments
TELEPUNK – BIG BAG
Big Bag ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက် Album ပါ။ တင်ထားတာ မတွေ့သေးလို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ… ပထမဦးဆုံးတင်တာမို့လို့ အမှားအယွင်းရှိရင် ပြင်ပေးကြပါခင်ဗျာ… ၀၁. တယ်လီပန့်ခ် ၀၂. လက်ခံထားဆဲ ၀၃. ကင်ဆာ ၀၄. ခွင့်လွှတ်ပေးရမယ်ပေါ့ ၀၅. ကြုံရင်ပြောပေးပါ ၀၆. ခုနစ်လွှာ ၀၇. ၂ကတ်ထဲပါသောရုပ်ရှင် ၀၈. ဟိုလိုင်္ဒီလို ၀၉. ဘီလူးတုသ် ၁၀. See Green ၁၁. ကျွန်ုပ်ဧ။်အခြားတစ်ဝက် ၁၂. မေ့ထားလိုက် ၁၃. Song (2) ၁၃. မသိမရှိ Download Link : www.4shared.com Mad Computerist ရဲ့ iFile link ကိုပါ ထည့်ပေးထားတယ်ဗျို့iFile talkboy ရဲ့ … Continue Reading →
June 23, 2009 cmmaung Big Bag New Myanmar Albums 60 Comments
Big Bag – ၀ဲစား
ထွက်တာတော့ တော်တော်ကြာနေပြီကွာ… ၂၀၀၄ လောက်ကတည်းကထင်တယ်… နားထောင်လို့တော့ မိုက်တယ်.. သူငယ်ချင်း၁ယောက်တောင်းတော့ သတိရတာနဲ့တင်လိုက်တာ…
June 15, 2009 koyazar အဆိုတော် (အဖွဲ့) Big Bag Myanmar Artist Unreleased Albums 10 Comments
၁. ဇော်ဝင်းထွဋ် – ဘာလိုလို ၂. အီတိုး – ရာဇဝင်ည ၃. Rဇာနည် – အသစ်ကပြန်စ ၄. ဇော်ဝင်းထွဋ်, တင်ဇာမော် – ရှင်သန်ခြင်း ၅. ဇော်ဝင်းထွဋ် – Mercury ည ၆. သျှီ – နေရာသစ် ၇. Lလွန်းဝါ – လောကအိမ် ၈. ဇော်ဝင်းထွဋ် – အချစ်စွမ်းအင် ၉. Big Bag – ဆေးဆိုးပန်းရိုက်မျက်နှာ ၁၀. ဖြိုးကြီး – ကြယ်တံခွန် ၁၁. ဇော်ဝင်းထွဋ်, ဆုန်သင်းပါရ် – ခရီးသွားမီးခိုးတန်းများ ၁၂. ဇော်ဝင်းထွဋ် – ပြတိုက်ထဲကနေ့ ပြတိုက်ထဲကည ၁၃. တင်ဇာမော် … Continue Reading →
May 30, 2009 Mad Computerist ဖြိုးကြီး အီတိုး အဆိုတော် (အဖွဲ့) အဆိုတော် (ကျား) အဆိုတော် (မ) အခွေ (အများ) ဆုန်သင်းပါရ် ဇော်ဝင်းထွဋ် တင်ဇာမော် သျှီ Big Bag Lလွန်းဝါ Myanmar Artist Rဇာနည်6Comments